Eyona Brokers ye Forex 2022 kunye noTshintshiselwano lweCryptocurrency
Abathengisi be Forex
Uninzi lweeBroker ezithenjiweyo
URhwebo lwexesha elimiselweyo
Eyona Scholarship yango-2022
Thenga i-BTC ngeKhadi
Uthelekiso lwe-BTC Anônimo
Isalathiso Sokoyika Nokubawa
Eyona Wallet yeEthereum
Eyona nto ingcono yeLitecoin Wallet
Iimpawu kunye neeRobhothi
Fumana eyona broker ilungileyo kuwe
Sizinikezele ekuziseni abarhwebi uphononongo lwe-broker olungakhethiyo ukubanceda bafumane abathengisi be-Forex abangcono kakhulu, iinketho zokubini kunye notshintshiselwano lwe-cryptocurrency kwiimfuno zabo zorhwebo kwi-Intanethi.
Sinophononongo olunzulu lwe-broker, iireyithingi kunye nesixhobo esiluncedo sokuthelekisa ukunceda abarhwebi ngokukhawuleza nangokulula ukuchonga abona bathengisi bangcono kwiimfuno zabo.
*Inkunzi yakho ingaba semngciphekweni
Utyalo-mali kwi-Forex, i-CFD kunye ne-FX ukhetho lubandakanya umngcipheko omkhulu welahleko kwaye ayifanelekanga kubo bonke abatyali-mali.
Ubuncinci bediphozithi yokungena
akhawunti yedemo yasimahla
I-Muitas ferramentas de ensino
Jonga Ngoku!Uvavanyo lweOlimpiki yoRhweboJonga Ngoku!Uvavanyo lweOlimpiki yoRhwebo
Ngaphezulu kwee-asethi ze-100 zokurhweba
Ukubuyela umva rápidas
Plataforma de alta tecnologia inkulumbuso
Jonga Ngoku!Uvavanyo lweDerivJonga Ngoku!Uvavanyo lweDeriv
Ukukhetha okukhulu kwezixhobo zokurhweba
IVários Prêmios I-Internacionais
Jonga Ngoku!Vavanya iTransTradeJonga Ngoku!Vavanya iTransTrade
Bona bonke abathengisi
Uphononongo lwe-Broker yokurhweba
Iqela lethu lifunde amakhulukhulu ee-broker kwaye likuzisela olona lwazi lubalulekileyo kuhlalutyo olubambeneyo kodwa oluneenkcukacha ukukunceda wenze isigqibo esinolwazi sokukhetha abona barhwebi borhwebo abalungileyo kwiimfuno zakho zomntu ngamnye.
Yintoni abarhwebi abarhwebayo?
Umrhwebi wokurhweba ngumthetheli ovumela abathengi ukuba bathenge kwaye bathengise izixhobo zokurhweba ngentlawulo encinci yekhomishini. Babonelela abarhwebi kunye nabatyali-mali ngokufikelela kumaqonga ukuze bakwazi ukurhweba kwiimarike ezahlukeneyo ezifana ne-Forex, i-Stocks, i-Commodities, Cryptomanes, iFutures, Indices, Metals, Energy, Options, Bonds, ETFs, CFDs, njl. ezibonelela ngendibaniselwano yezixhobo zemali.
Ukongeza ekuboneleleni ngeeakhawunti zokurhweba kunye namaqonga, aba barhwebi bahlala bebonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo zokuthengisa, kubandakanya izixhobo zemfundo, izixhobo zokurhweba, uhlalutyo lweemarike, ii -apps zokurhweba, iiplatifomu zokurhweba zentlalo, kunye nokunye.
Urhweba njani kwi-intanethi?
Ukurhweba nge-Intanethi kubandakanya utyalo-mali kwiimveliso zemali usebenzisa iqonga lokurhweba elinikezelwe yi-brokerage firm eya kubonelela ngeemarike ezahlukeneyo kunye ne-asethi.
Xa uthengisa kwi-intanethi, uthenga (uhamba ixesha elide) okanye uthengisa (uhamba mfutshane) izixhobo zemali kwaye uqikelele ukuba amaxabiso aya kunyuka okanye ehla ukuze uzame ukwenza inzuzo kwiintshukumo zemarike. Umrhwebi usebenza njengommeli phakathi komthengisi kunye neemarike abarhweba kuzo.
Ukurhweba kwi-Intanethi kufikeleleka ngokulula, nabani na onoqhagamshelo lwe-intanethi unokuvula i-akhawunti ye-brokerage kwaye arhwebe nge-intanethi nge-desktop, iwebhu kunye neeplatifti zokurhweba nge-elektroniki.
Ilawulwa njani imarike ye-Forex?
Imarike ye-Forex ilawulwa ngumthetho kumazwe amaninzi emhlabeni jikelele. Oku kuyimfuneko ukunciphisa amathuba obuqhophololo kwicala lomthengisi we-Forex kunye nokukhusela inkunzi yabatyali-mali.
Ukungena kwimarike ye-interbank, umthengisi ufuna kuphela ukubhalisa njengombutho onikezela ngeenkonzo zemali.
Oko kukuthi, ilayisensi yabathengisi be-Forex ayinyanzeliswa. Kodwa abadayisi abaceba ukusebenza ngokunyanisekileyo bajonge ukufumana ilayisenisi, kuba inika abasebenzisi isiqinisekiso sokuthembeka nokukhusela.
Enyanisweni, ukuze ufumane ilayisenisi, umthengisi kufuneka azalisekise iimeko ezininzi ezinzima: ukuqinisekiswa ngokufanelekileyo, ukulungelelanisa ingxowa-mali yembuyekezo, ukugcina iingxelo ezicacileyo, njl. Iilayisenisi zomthengisi zahlulwe ngokwamanqanaba aliqela.
IKomishoni yoTshintshiselwano lweZiphuma kwi-US (CFTC) kunye ne-US National Futures Association (NFA). Le yeyona mibutho ifuna kakhulu, ilawula ngokungqongqo umsebenzi wabarhwebi bayo, ngoko ke abathengisi abanamaphepha mvume anjalo ngabona bathembekileyo.
I-UK's Financial Regulatory Authority (FSA) kunye ne-Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Apha, iimfuno zokukhupha ilayisenisi zilula kancinci, kodwa ngokubanzi kunzima kakhulu ukuzifumana.
IKomishoni yoKhuseleko kunye noTshintshiselwano lwaseCyprus (CySEC) kunye neGunya leeNkonzo zeMali yaseMalta (MFSA). Ukunika ingxelo kulula kwaye ulawulo lulonke lubuthathaka kule mibutho. Nangona kunjalo, iilayisensi zabo zikwakhutshwa kuphela kubathengisi abathembekileyo.
IKhomishini yeeNkonzo zeZimali zeZiqithi zaseBritane (i-FSC BVI) kunye neKomishoni yeeNkonzo zeZimali zaMazwe ngaMazwe eBelize (IFSC). Le mibutho ayifuni mthengisi kwi-ofisi yayo yommeli, kodwa yenza uphicotho rhoqo.
Inqanaba lesihlanu nelesithandathu
iSeychelles Financial Services Authority (SFSA) kunye neSaint Vincent kunye neGrenadines Islands Financial Regulatory Authority (SVG FSA). Babonisa inkqubo yelayisensi elula kunye nenqanaba elincitshisiweyo lolawulo.
Aba balawuli banikwe njengomzekelo; enyanisweni, zininzi kakhulu. Inketho engcono kakhulu kukukhetha umthengisi omisebenzi yakhe ilawulwa yi-tier 1 ukuya kwimibutho emi-4; zezona zithembekileyo.
Kodwa kukho enye inkcukacha. Ngokommandla, umlawuli unamandla asemthethweni kuphela kwimida yelizwe lakhe. Oku kuthetha ukuba ukuba, umzekelo, umhlali we-European Union usebenza kwi-EU, abalawuli be-EU kuphela abanokubakhusela.
Yintoni umthengisi othembekileyo?
Xa ukhetha umthengisi we-Forex, kubalulekile ukuba ungabi lixhoba le-scammer, ebizwa ngokuba yi "bucket shop" okanye "akukho dilesi" inkampani.
Ukukunceda ufumane umahluko phakathi komthengisi ongathembekanga kunye nothembekileyo, sichonge iimpawu ezininzi zomthengisi ongathembekanga kunye nomthengisi othembekileyo:
umthengisi othembekileyo abakhohlisi
Ulwazi malunga nenkampani lubonisa zonke izinto ezilungileyo kunye nezingalunganga; umthengisi usebenza kunye nabaqalayo kunye nabarhwebi abanamava Ndikhetha ukusebenza kunye nabathengisi be-novice, izinto ezininzi zokuthengisa zabaqalayo
Iikhomishini kunye nokusabalalisa kuboniswe ngokucacileyo Iikhomishini ezifihlakeleyo kunye neentlawulo
Akukho ukutyibilika okanye ukungasebenzi kakuhle Iingxaki nge-scalping esebenzayo, i-server ikhenkceza, i-slippages rhoqo
Inkonzo yabathengi iguquguquka, abacebisi bafanelekile Inkxaso yoMthengi ithule, akukho kulungiswa ngokukhawuleza kunokwenzeka
Ukurhoxiswa kweemali kwenziwa ngokukhawuleza Ingxelo yabathengi ihlala ineengxaki zokurhoxisa imali
Inkampani enembali ende, inkunzi enkulu, ilayisenisi kunye nenani elikhulu lokuphononongwa okuhle Inkampani isanda kwakhiwa, imvelaphi kunye nobukhulu benkunzi egunyazisiweyo ayaziwa, ilayisenisi ayizange ipapashwe, izimvo zabathengi zingalunganga okanye izimvo zilungile kodwa zibhalwe ngathi "ikopi yekhabhoni"
URhwebo lweNtlalo yeAvatrade
I-AvaTrade yinxalenye yoluhlu lwethu lwezona ndawo zilungileyo zokurhweba kwezentlalo njengoko ibonelela abarhwebi ngamaqonga athe ngqo kunye nangathanga ngqo.
I-AvaTrade ibambisene nabanye abona baboneleli bemiqondiso ababalaseleyo emhlabeni ukuqinisekisa ukuba abarhwebi banokulandela abona barhwebi babalaseleyo naphi na apho bakhoyo.
Bakwanikezela ngokurhweba ngokuzimeleyo kwiiplatifti zokurhweba ezicacileyo kuluhlu olubanzi lwezixhobo zokurhweba ezingaphezu kwama-250 ezibandakanya i-forex, iiCFD kunye nee-cryptocurrencies.
Amaqonga okurhweba kwezentlalo e-AvaTrade abandakanya:
Umrhwebi weMirror-Yonwabela urhwebo lwencwadana, isemi-automatic okanye oluzenzekelayo ngokulandela ababoneleli bakho bemiqondiso obakhethayo. Unokukopa izicwangciso zokurhweba ze-algorithmic ezenziwe ngabarhwebi abanamava kunye nabaphuhlisi abahamba phambili.
I-ZuluTrade -Khetha kwinani elikhulu lababoneleli bemiqondiso, ababekwe kusetyenziswa iiparamitha ezahlukeneyo ezisebenzayo, kubandakanya ukwehla okuphezulu kunye nenzuzo ephakathi.
I-AvaTrade yenye yee-brokers ezinkulu zehlabathi ze-intanethi ngokomthamo worhwebo. Zilawulwa kwiindawo ezi-6 ezichukumisayo kuquka iYurophu, i-Australia kunye noMzantsi Afrika. Iilayisensi zayo zolawulo zithatha amazwekazi ama-5. Oku kuqinisekisa ukuba unokwenza urhwebo olukhuselekileyo nolukhuselekileyo kwindawo yokurhweba ebanzi ababonelela ngayo.
I-AvaTrade ibonelela ngeendidi ezahlukeneyo zeqonga lokurhweba kwezentlalo kunye nemirhumo yokhuphiswano, iziseko zorhwebo ezikhokelayo kushishino kunye nenkxaso egqwesileyo yabathengi.
Ngezi zizathu kunye nokunye, ngokulula baba ngamaqonga ethu angcono orhwebo lwentlalo.
Ngaphezulu kwezixhobo zokurhweba ze-250
Iiplatifti ezininzi zokurhweba kwezentlalo
Izixhobo zokurhweba zasimahla kunye nezalathi
Ummiselo kwiindawo ezi-6
inkxaso ebalaseleyo yabathengi
Ubuncinci bediphozithi ye-100 yeedola
Bonke abarhwebi be-Forex kufuneka bavavanye le miba ilandelayo:
IParmetmet de Negociação: Deve haver um grande número de ativos por onde escolher, com muitos prazos de validade diferentes para escolher. I-Deveria haver pelo menos dois instrumentos diferentes para escolher, embora muitos corretores ofereçam mais do que isso.
Iilwimi zeQonga: Isto será mais ibalulekile ukwenza ialguns do que outros. IiTodas as plataformas são fornecidas em inglês, mas as opções linguísticas adicionais podem variar muito. I-Verifique se o 'iwebhusayithi' yeplataforma são fornecidos no seu idioma nativo.
Ubuncinci bedipozithi: Ngaba kufanelekile ukuba ungene kwi-negociar? Os corretores não cobram taxas por negociação, pelo que todos os fundos depositados podem ser utilizados para negociar. O depósito mínimo médio kungene $ 10 e $ 300. I-Qualquer montante que igunyazisiwe yiyo i -adoado acima da mia.
Ukhetho Lwebhanki: Eyakho indlela yebhanki ekhethwayo inikezelwa? Lo mbuzo kufuneka uphendulwe ekuqaleni kwenkqubo yovavanyo, kuba ukuba akunjalo, kuya kufuneka ukhangele omnye umthengisi.
Iibhonasi kunye neeNyuso: Os montantes de bônus até 100% são oferecidos por alguns corretores. Estes virão com condições que devem ser cumpridas antes de fazer uma retirada. I-Mesmo assim, os bônus e outras promoções podem dar um bom impulso aos fundos da conta.
Inkxaso yomthengi: Um gestor de conta dedicatedado pode ou não ser fornecido, mas todos os osve devem ter acesso a apoio ao cliente. Njengokuqwalaselwa kwe-nesta área incluem os métodos de contato disponíveis e as horas durante as quais o apoio é prestado.
Njengo escolhas de abathengisi ekhoyo iya kubandakanya zombini iinkampani ezintsha kunye nezisekiweyo. Uninzi lulawulwa, ngelixa ezinye zingenakubakho ngenxa yendawo yazo.
Kuyinyani eqinisekisiweyo ukuba abo basebenza nomthengisi omkhulu badla ngokufumana eyona nto ininzi kwaye bafumane ezona ngxaki zimbalwa.
Ngelixa unokuba novuyo lokuqalisa, zininzi iingenelo zokuthatha ixesha lokukhetha eyona ilungileyo. icorretor ye Forex.
Yintoni imarike ye-Forex?
Le yimarike yotshintshiselwano lwangaphandle edibanisa imisebenzi yezemali yazo zonke iibhanki kunye nemibutho yamazwe ngamazwe. Eyona nkqubo yezoqoqosho inkulu ehlabathini ifumaneka kumntu wonke.
Ukuqala njani ukurhweba kwi-Forex?
Ekubeni umntu akanako ukuba ngumthathi-nxaxheba kwimarike, umrhwebi kufuneka abhalise kumthengisi we-Forex. Umrhwebi ubonelela umrhwebi nge-terminal yokurhweba, izixhobo zokurhweba kunye nawo onke amathuba okurhweba nge-Forex.
Ngaba kukho naziphi na iinketho zengeniso ye-Forex esebenzayo?
Ewe. Umrhwebi unokutyala imali enomngcipheko omncinci kwi-akhawunti ye-PAMM / LAMM, elawulwa ngabadlali beemarike abaqeqeshiweyo. Kukho ezinye iimpawu ezifana nolawulo lwentembeko kunye neenkonzo zokurhweba ngokukopa.
Ikhuselekile kangakanani imarike ye-Forex?
Njengoko urhwebo lwenziwa ngokohlobo lomda, kuhlala kukho umngcipheko kwaye ekuqaleni kuphezulu kakhulu. Kodwa abarhwebi banikezela ngamathuba amaninzi asebenzayo okuhlukana komngcipheko, umzekelo iipotfoliyo zePAMM. Kwakhona, iimali zembuyekezo kaxakeka.
Amanqaku e Forex
Inqaku leenketho zokubini
Fumana incwadana yeendaba
Abathengisi abadweliswe kwiwebhusayithi baye bahamba ngophando oluninzi kunye nohlalutyo olunzulu.
Injongo yethu kukubonelela ngophononongo olungakhethi cala kwii-brokers zokurhweba kwi-intanethi ukunika abarhwebi ukuqonda okucacileyo kwee-brokers ezahlukeneyo ezikhoyo. Abarhwebi banokusebenzisa inkonzo yethu yasimahla, kodwa kufuneka benze eyabo inkuthalo kwaye bazenzele ezabo izigqibo xa bekhetha umthengisi wokurhweba kwi-intanethi ohambelana neemfuno zabo.
Ngelixa uninzi lwedatha yethu iqinisekisiwe ngokuthe ngqo ngaba barhwebi, inokwahluka kumaxesha ngamaxesha. Asinaluxanduva lolwazi olungachanekanga okanye oluphelelwe lixesha kuphononongo lwabarhwebi bethu abarhweba kwi-Intanethi kwaye kufuneka uqinisekise yonke idatha ngokuthe ngqo kumthengisi. Amaxabiso, imigaqo, iimveliso kunye neenkonzo kwiiwebhusayithi zeqela lesithathu zinokutshintsha ngaphandle kwesaziso.
Iphepha elichazayo ukuba awunatyala
I-Forexdigital.net yenzelwe iinjongo zolwazi kuphela kwaye ayenzelwanga ukuba isasazwe okanye isetyenziswe nguye nawuphi na umntu kulo naliphi na ilizwe okanye ulawulo apho ukuhanjiswa okanye ukusetyenziswa okunjalo kuya kungqubana nomthetho wendawo okanye ummiselo. Le webhusayithi ayiboneleli ngeengcebiso zotyalo-mali, kwaye ayingomnikelo okanye isibongozo salo naluphi na uhlobo lokuthenga okanye ukuthengisa naziphi na iimveliso zotyalo-mali. Sinokubuyekezwa ngabathengisi bomntu wesithathu. Le mbuyekezo ayifanelanga ibonwe njengesiqinisekiso okanye isindululo nge-forexdigital.net, kwaye akufanele ukuba ibe nefuthe kwiireyithingi zabarhwebi bethu.
I-CFD, i-Forex, i-Cryptocurrencies kunye nezinye izixhobo zemali zithwala umngcipheko omkhulu wokulahlekelwa yimali ngokukhawuleza ngenxa yokunyusa. Bonke ababoneleli banepesenti enkulu yee-akhawunti zomtyali-mali ezithengisayo ezilahlekelwa yimali xa zithengisa ii-CFD kunye nezinye izixhobo zemali kunye neenkampani zabo. Kuya kufuneka uqwalasele ukuba uyayiqonda na indlela ii-CFDs, Forex, Cryptocurrencies ezisebenza ngayo kunye nokuba ungabeka emngciphekweni wokuphulukana nemali yakho. Ungaze utyale imali ongenakukwazi ukuyilahleka.
Ilungelo lokushicilela © 2022 — Forexdigital.net Onke amalungelo agciniwe.
ISALVARI E ACEITAR